Ogaden News Agency (ONA) – War-saxaafadeed lagu taageerayo darawaliinta taksiyada ee geesiga ah
War-saxaafadeed lagu taageerayo darawaliinta taksiyada ee geesiga ah
Dhaq-dhaqaaq isku magacaabay – The Global Civic Movement for Change in Ethiopia – ayaa soo dhaweeyay shaqa ka fadiisadka ay sameeyeen taksiile-yaasha Addisababa. Wuxuu sheegay dhaq-dhaqaaqan inuu taageersanyahay sababtoo ah bay yidhahdeen waxay muujinayaan dhibaatada haysata dadka Itobiya oo doonaya inay cabashadooda si nabadgalya ah ku cabiraan. Waxayna qayb ka tahay bay yidhaahdeen diidmada lagaga soo horjeedo kooxda yar ee 20ka sano ku haysata xukunka xoogga qayaxan iyo doorasho beenaadka.
Waxay sheegeen dhaq-dhaqaaqa (The Global Civic Movement for Change in Ethiopia) in 1974tii lagu riday xukuumadii boqortooyada ahayd banaanbaxyo uu shacabka Itobiya u dhammaa. Sidoo kale ayay gadoodkii ka dhashay doorashadii 2005tii darawaliinta takaasida si buuxda u taageereen rabitaanka dimoqraadiyadda. Waxay intaa raaciyeen in shaqa ka fadhiisadka darawaliinta Takaasida ay ku dhiirigalinayaan dadweynaha in isbadal uu iman karo. Sidaa darteed waxay si buuxda u taageereen shaqa joojinta ay sameeyeen darawaliinta waxayna ku tilmaameen ianay yihiin kooxdii ugu horeysay ee ku dhiirata tan markii sida naxariis darada ah uu u laayeen dadkii banaanbaxayay 2005tii ciidanka KT Zinawi.
Wuxuu dhaq-dhaqaaqa (The Global Civic Movement for Change in Ethiopia) ugu baaqay dhamaan shucuubta Itobiya inay ka xoroobaan cabsida oo si wadajir ah ay u taageeraan darawaliinta takaasida.
Waxay sheegeen in xukuumadda dhiigyacabka ah ay hadaba bilowday inay cabudhiso banaanabaxa taksiilayda iyagoo bilaabay inay qaarkood xabsiga dhigeen qaar kalena ay kala wareegeen taksiyadii ay lahaayeen.
Wuxuu dhaq-dhaqaaqa (The Global Civic Movement for Change in Ethiopia) cambaareynayaa talaabooyinkaa sharci darada ah iyagoo ugu baaqaya qaybaha kala duwan ee bulshada Itobiya – dhalinyarada, ardayda, shaqaalaha, tujaarta, shaqaalaha dawladda beeralayda – intaba inay taageeraan darawaliinta takaasida oo ay shaqa ka fadhiisad sameeyaan oo aanay wax xidhiidha ah la yeelanin xukuumaddan Kali-taliska ah ee sharcidarada ku dhisan.
Waxay ku soo gunaanadeen; inuu helo shacabka Itobiya dhamantii Gobanimo, Cadaalad, iyo Dimoqraadiyad dhab ah. Guusha waxaa iska leh shacabka Itobiya.
The Global Civic Movement for Change in Ethiopia
waa arin hordhac ah oo fiicaan waxaana fiic naan lahayd in ay sii socoto basas layaashuna in ay ku biiraan ayaa fiic naan lahayd kadibna sidaas ay isku raacaan
waa guul gumaysigana waa u guul daro
waan soo dhawaynhaynaa, waana wax loo baahanayahay
gobanima doonku ha guulaystu insha allaah, amiiiiiiiiiiiiiiiin yaa rabb.
Waa Talaabo xaga hore loo qaaday…Waxaana filaynaa inaan maalmahan dambe aragno isu soo baxyo iyo Shaqo joojin fara badan sida hadaba ka bilaabmatay Waqooyiga dalka oo Laydhkii Korontada ay ka Jareen kooxo Mucaarid ah.